Nanambara ny Filoha fa izy rehetra dia samy diso nefa tsy havaha olana raha hitanisa ireo fahadisoana ny andaniny sy ny ankilany fa ny mety dia ny mampitodika azy ireo amin’ny asa nataon'i Jesosy azy ireo, koa rehefa samy manaiky fa diso dia ho mora ny hitarihana azy ireo amin’ny lalam-baovao, fomba fiasa vaovao mba hasalamana tsara ny Fiangonana satria tsy misy fitoriana filazantsara vanona ao anatin’ny ady koa rehefa miady ny Fiangoanana, miady ny Pastora dia maty ny fijoroana vavolombelona ka hojerena izay hifandaminana ary samy handeha hodiovin'i Jesosy.
Zavatra roa ihany no hiseho eto Sambava, na tena hitondra fihavanana na sanatria vao maika hifampitso-drano tanteraka. Nilaza Pastora Dr Rakotonirina Davida fa didiana mba hiverina ho aty amin’ny FLM foibe Ampandrozonana ny Kristiana rehetra izay efa nisintaka any amin’ny FLM Sambava centre ary ny Pastora izay nitondra dia tsy azo ekena ho Pastora raha tsy miverina, ary rehefa miverina kosa dia tsy azo hapetraka intsony eto Sambava fa ny mpitondra ny Fiangonana no miara midinika ny toerana hamindrana azy.
Ny mambra natsahatra tamin’ny andraikitra nosahanina rehefa miverina dia averina aminy ny andraikiny, ary ny Katedraly izay efa natsangan'izy ireo raha manaiky dia atolotra ny FLM Foibe dia eo no manapa-kevitra atao inona ilay trano. Fa raha mihizingizina amin’ny heviny kosa izy ireo dia tsofina rano tanteraka tsy ho FLM intsony.
Andrasana anio ny valin'ny dinika nifanaovana tamin'ny andaniny sy ny ankilany ary hihazakazaka handeha handamina ny any Andapa ny Filoha. Hitohy any Vohemar-Ampanefena ary Antalaha ny fampihavanana satria efa nandrahona ny hamaky sinoda ho roa ireo mpino raha tsy ahitam-bokany izao.